Tesla kpughere ihe osise mbụ nke Model Y | Akụkọ akụrụngwa
Tesla gosipụtara ihe osise mbụ nke Model Y
Eder Esteban | | General, Noticias
Ogologo oge Tesla akpọwo Model Y ugboro ugboro. Ma na nkwukọrịta ụlọ ọrụ gọọmentị, ma ọ bụ na ozi sitere na Elon Musk na netwọkụ mmekọrịta. Ọ bụ ezie na ruo ugbu a amabeghị mgbe ụgbọ ala ahụ ga-abata ma ọ bụ na anyị enweghị foto ya. Ọzọkwa, enwere ọtụtụ obi abụọ ma ụlọ ọrụ ahụ ọ ga-enwe ike ịzaghachi ọchịchọ ahụ.
Maka na anyị ahụla nsogbu nrụpụta ị na-ahụ na Ihe Nlereanya 3. Ma, O yiri ka ọbịbịa nke Model Y ọhụrụ a na-eru nso. N'ihi na Tesla ekpughelarị ihe osise mbụ ya. Iji mepụta atụmanya.
Amaara ama na Model Y ọhụrụ a ga-abụ kọmpat SUV. Ọ bụ ezie na ihe ekpughebeghị ruo ugbu a bụ ma ọ ga-abanye n'ọnọdụ akụ na ụba nke ụlọ ọrụ ahụ, ma ọ bụ ọ bụrụ na nke ọzọ, ọ ga-abụ ihe nlereanya nke kachasị ọnụ. Ma usoro mgbasa ozi dị iche iche na-egosi na ọ ga-abụ nha nha nke Tesla Model X.
Ihe oyiyi mbụ a anaghị ekpughe ọtụtụ ihe, ma ọ nwere ike inye anyị echiche banyere ihe anyị ga-atụ anya ya na ekwentị. Ọ bụ ezie na ọ bụghị na anyị kwesịrị ịtụkwasị onwe anyị obi oke. N'ihi na ọ mere n'oge gara aga na Tesla na-ekpughe ihe oyiyi na nhazi ikpeazụ ahụ enweghị ihe ọ bụla jikọrọ ya na ihe oyiyi ahụ.
Kedu ka ọ dị Ka anyị hụ na Model Y a, ha bụ ọnụ ụzọ windo (imeghe elu). Ọ bụ naanị njirimara nke akwadoro na ụdị ọhụụ a. Na onyonyo ị nweghị ike ịhụ nkọwa a.
Maka ugbu a, anyị nwere ike ichere ka Tesla kpughere nkọwa ndị ọzọ gbasara ụdị ọhụrụ a. Ruo ugbu a ọ nweghị ihe ekwuru banyere ngosi ma ọ bụ ụbọchị mmalite nke ekwentị. Ya mere, anyị ga-ahụ ihe ga-eme na ọnwa ndị na-abịanụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Tesla gosipụtara ihe osise mbụ nke Model Y
Matrix PowerWatch X, smartwatch mbụ nke na-arụ ọrụ na ahụ anyị na-ekpo ọkụ
Norman: ọgụgụ isi nke mbụ chebere dị ka psychopath